Ungazvidzivirire sei kusagadzikana kwemisika yemari? | Ehupfumi Zvemari
Ehezve, iyo yechipiri kota yegore haisi kuve yakadzikama kune vadiki nepakati varimi. Spain, Itari, Middle East neNorth Korea mamwe emawoko enzvimbo ari kuwedzera kusagadzikana kumisika yemari. Uye chaizvo zvakanyanya kumusika wemasheya uri kutambura kubva kune aya masosi asina kumbobvira ave akanaka kune purofiti yekuchengetedza. Kunyangwe painewo kushomeka kwemazwi anotenderwa ayo anonongedzera kuchokwadi chekuti isu tiri kuona shanduko mune inoitika mamiriro mumisika. Kunyangwe kubva kumaforamu anotyisa kwazvo, mamiriro ezvinhu akaipisisa akafanotaurwa kuEuropean Union.
Chero zvazvingaitika, inguva yekufungisisa pane zvaunofanira kuita nemari yako kubva zvino zvichienda mberi. Vhiki rino, iyo yakasarudzika indekisi yemari inoshanduka, iyo Ibex 35 yakagadzira kudonha kwakakura kwe2,49% uye iyo yakatora kuenda ku9.521,3 poindi. Uku ndiko kuderera kwaro kwechipiri pakukura kwegore, uko kwese kukosha kwesarudzo dzeSpanish kwakapera nekudonha. Kunyangwe ipo pachiitika chiitiko chakanyanya kutaurwa chiri mubhengi sezvo mamwe mabhanga akaderera pamusoro pe5%. Aya ndiwo mazwi makuru pamusika wemasheya, asi ndizvo zviri kunyatsoitika naBanco Sabadell, Banco Santander kana Bankia, kupa mashoma mashoma eiyi mamiriro anoshungurudza.
Imwe yemisika yemari iri kubuda mumamiriro azvino ehupfumi ndeiya yeItaly. Mupfungwa iyi, iyo FTSE yakawira nekukomberedza 3,5%, nepo transalpine equities yaive yakati wandei zvishoma. Tichifunga nezve mamiriro aya, hazvishamise kwatiri kuti vadiki nevepakati varimari vari kutanga kunetseka nezve mamiriro ekuchengetedza kwavo. Uye nemubvunzo wakakodzera, chii chaunofanira kuita nemari yako kubva panguva chaidzo idzi? Ehezve, ivo vane maturusi emari kuitira kuti kurasikirwa kuve kwakanyatso kuiswa mune yavo mari chirevo. Iwe unoda here kuziva mamwe eanoshanda kwazvo?
1 Kugadzikana: kudzikisira zvinzvimbo
2 Tarisa dzimwe nzira dzekudyara
3 Kusiyanisa mari dzese
4 Maakaundi anobhadhara zvakanyanya
5 Inverse zvigadzirwa pamusika wemusika
Kugadzikana: kudzikisira zvinzvimbo
Izvi zvinofanirwa kuve pasina mubvunzo chako chekutanga chiyero chekuchengetedza uye pamusoro pemamwe mazano akaomarara. Dai iwe waive uchiita mari mumusika wemasheya, chichava chikonzero chakakwana chekufarira izvi zviwanikwa zvemari panguva yakadai seyakazotevera zororo. Mumwedzi iyi zviri nani kuve mune zvemari pane nenjodzi dzinotorwa panguva ino nemisika yemari. Sezvo zvisingakodzeri kutora njodzi kuburikidza nekuvhiya nemhedzisiro isina chokwadi.
Chimwe chiitiko chaunogona kuburitsa kubva zvino zvichienda mberi ndechekuti nzvimbo dzako mumusika wemasheya dzakarasika. Muchiitiko ichocho, mhinduro ichave yakanyanya kuomarara. Nekudaro, iwe unogona kuita kutengesa kusarudzika kuitira kuti usatsvage kuenda mberi mumadonhwe. Mumusika wemasheya zvinogara zvichinzi zviri nani kurasikirwa imwe yuro pane kwete mashanu. Ino inguva yekushandisa iyi yakakurumbira mime pakati pevarimi vane ruzivo rwakawanda mune irwu rudzi rwekushanda. Kubva uchifunga kuti waita oparesheni yakaipa uye hapana chimwezve. Pachave nenguva apo iwe yaunogona kugadzirisa kuderera uku mune rako remunhu capital. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Tarisa dzimwe nzira dzekudyara
Chimwe chei solutions Takatarisana nemamiriro ezvinhu akaoma aya epasi rese misika yemasheya ari kusimukira panguva ino chaiyo, ndeye kutsvaga sarudzo dzinoita kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Ehe zviripo, kunyangwe chiri chokwadi kuti ivo vanoenda kuburikidza nekuenda kune imwe misika kubva kwaungave usina ruzivo rwekuita chero rudzi rwekuita. Mupfungwa iyi, simbi dzakaringana ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzaungaite. Kusvika padanho iro goridhe rakakoshesa mazuva ano pasi pekaviri manhamba muzana. Zvikonzero zvinofanirwa kuwanikwa mukuti kuyerera kwemari kubva kuhafu yepasi kunotsvaga pekuhwanda pekuchengeta yavo yega uye yemhuri nhumbi.
Iko kukanganisa kukuru kweiyi inozivikanwa yemari asset ndeyekuti zvakanyanya kunetsa kuvhura nzvimbo. Kusvikira pakuti iwe ungamanikidzwa kuita kutenga chaiko kwesimbi yakakosha iyi. Chero zvazvingaitika, zvingave zvakakodzera kuti upfuure neiyi nzira nekuti kugona kwayo kwekutenda ndeyechokwadi kwazvo. Uye mune zvese zviitiko, yakakwira kupfuura iyo inopihwa nehombodo panguva ino. Kunyangwe paine chokwadi chekuti vamwe vaongorori vemusika wemari vanofunga kuti kunyangwe mamiriro ezvinhu, kuchine "kukosha" kwakanaka kwemakambani eSpain akanyorwa pamusika wemasheya.
Kusiyanisa mari dzese
Hapana nzira yaunofanirwa kuchengetedza yako yese capital kuti iwanikwe yekudyara mudengu rimwe chete. Kana zvisiri, pane kudaro, kiyi yekudzivirira dzimwe njodzi iri mukuvatungamira kune zvakasiyana zvigadzirwa zvemari uye kunyangwe zviwanikwa zvekudyara. Nenzira iyi, iwe unogumira kurasikirwa mune yakaipisisa mamiriro ezvinhu mumisika yemari. Iri zano riri nyore kwazvo kuita sezvo iwe uchingo fanirwa kurigovera pakati pezvinhu zvemari zvinogona kushanda mune ino yekubatana mamiriro. Ehezve, haina njodzi-isina nekuti pakupera kwezuva isu tiri kutaura nezvemari.
Kubva pane ino maonero, imwe yeanonyanya kuita marongero anopihwa pamwe chete mari. Asi chero bedzi ivo vachibatanidza akati wandei emari zvinhu kana zvinhu zvine zvishoma zvakaderera kudzikisira. Uye zvakare, ivo vanogona kuvandudzwa pasi peanoshanda manejimendi, zvinova zvinoita kuti mari dzienderane nezviitiko zvese zvehupfumi, kunyangwe izvo zvisina kunaka. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuwana kudzoka kubva kunzvimbo idzi. Nezvakanakira kuti kune akawanda mari yekudyara yeaya maitiro. Kubva pane akasiyana mafomati uye makambani manejimendi anovaita.
Maakaundi anobhadhara zvakanyanya
Pane imwe mhinduro isingambokundikana mumaprofayiri anodzivirira kana anochengetedza. Sezvazviri semuenzaniso iri kirasi reakaunzi iro rinopa purofiti yakakura kune avo vanobata. Nekudzoka pane kuchengetedza kunoitika pakati pe1% uye 2%. Iyo yakawanda inoratidzira muzana isina chekuita nekuita kweakanyanya echinyakare maakaundi ebhangi. Pasina chero chinodikanwa kuitira kuti iwe ugone kuwana izvo zvigadzirwa zvakagadzirirwa kuchengetedza. Hazvishamisi kuti chikamu chikuru chemabhangi chinotova neakaundi yeaya maitiro. Nekuti ivo vanokuvimbisa iwe yakagadziriswa uye yakavimbiswa kuita gore rega. Chero chii chinoitika mumisika yemari.
Rudzi urwu rwemabhangi maakaundi rwakavhurika kune ese profiles profiles, kunyangwe mune dzimwe nguva zvichidikanwa kuti iwe utungamire payroll yako kana yakajairwa mari Uye mumamodeli anodikanwa, kusvika kumabhiri akasiyana siyana emumba (magetsi, mvura, gasi, nezvimwewo). Saka kuti iwe ugone kutogashira chikamu chemari idzi pamba kuburikidza nekudzoka kunosvika 5%. Chero zvazvingaitika, ndechimwe chega zviwanikwa zvaunazvo panguva ino kuita kuti mari ichengetwe. Panguva iyo iyo mutengo wemari uri pazvekare zvakaderera. Mune mamwe mazwi, mutengo wemari ndi0%, izvo zvinoita kuti maakaundi anobhadhara zvakanyanya awedzere.
Inverse zvigadzirwa pamusika wemusika
Kana kudonha mumisika yequity kukanyanya, iwe unenge uine izvo zvinonzi zvinopesana zvigadzirwa zviripo. Aya ndiwo mamodheru maunogona kuwana mari yakawanda sezvo mapopoma acho ari akanyanyisa. Nekudaro, icho chigadzirwa chine njodzi huru nekuti unogona kusiya akawanda maeuro munzira. Uye zvakare, ivo vanonyanya kukodzera kune chaiwo chaiwo nguva dzisingambokudziridze mune yepakati nepakati refu. Iko kwaunonyatso kurasikirwa nemari yakawanda.
Aya mafambiro anogona kuitiswa kubva pakutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya kuburikidza nezvinonzi zvikwereti kutengesa. Kune inverse mari yekudyara iyo mubairo unodzikira mumisika yemari. Izvo zvinogona kuiswa pamusika weSpanish wemusika pachezvayo kana kune mamwe epasi rese masheya indices. Pasi pemakanika ayo anogara akafanana uye anovandudzwa aine akafanana mashandiro ekushandisa. Izvi ndizvo zvigadzirwa zvinogona kubatsira zvakanyanya kana mamiriro aunoda akasangana. Asi pane zvinopesana, ivo vanotakura njodzi dzakakomba zvikuru izvo zvinoreva kuti iwo haana kukodzera kune ese profiles evadiki uye epakati varimi.
Zvakare kuburikidza nemawaranti iwe unogona kuisa iyi yakasarudzika zano, kunyangwe kubva kune yakawanda nzira ine hukasha kupfuura mune apfuura mamodheru. Uye zvakare, iwe unogona kutakura kufamba uku uchidzikira munguva pfupi yekugara. Saka kuti iwe ugone kugadzirisa izvi zvinzvimbo mune ipfupi nzvimbo nzvimbo yenguva. Kunyangwe ivo vachivavarira kune vanoita mari vane ruzivo rwakawanda mukirasi ino yemisika yemari.
Kufanana nezvimwe zvigadzirwa, senge zvigadzirwa, zvakaumbwa uye zvine maitiro akafanana. Asi ivo havana kukurudzirwa zvakanyanya nekuda kwenjodzi huru dzaunomhanya nadzo mukuvashandira. Iko kwauchazofanira kuisa panjodzi mari yako kuti uwane zvinangwa zvako zvaunoda munyika yekudyara. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga kuti misika yezvemari iriko panguva idzodzo chaidzo. Usakanganwe kana iwe uchida kuchengetedza yako mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ungazvidzivirire sei kusagadzikana kwemisika yemari?